October 3, 2020 - Achawlaymyar
သားဦးစနေ မီးလို မွှေဆိုတာ ယုံတမ်းစကားလား?တကယ်လား..?
October 3, 2020 by Achawlaymyar
သားဦးစနေ မီးလို မွှေဆိုတာ ယုံတမ်းစကားလား?တကယ်လား..? သားဦးစနေမွေးရင်ထိတ်လန့်တတ်တဲ့ လူတွေအတွက် စနေသားသမီးဟာ ဒုတိယဘုန်းကံအကြီးဆုံး စနေသားဦးမွေးလို့ ဓါးထမ်းကျော်တဲ့မိဘတွေ စောစောသေကုန်ကြလေရဲ့ စနေနေ့မရှိခဲ့ရင် ရတနာ၃ပါးလည်း လောကမှာ မရှိနိုင်တော့ဘူး …။ စနေနေ့ကို အကြောင်းပြုပြီးရတနာ ၃ ပါးစုံတဲ့ ရတနာအခါတော်နေ့ပဲ။ စနေနေ့ဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် ဓမ္မစက်စတည်တဲ့နေစနေနေဟာ သိပ်မွန်မြတ်တဲ့နေ့ ဘုရားရတနာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ စပေါ်သည် …။ တရားရတနာနဲ့ သံဃာရတနာကတော့ စနေနေ့မှာစပေါ်တာ ဘုရားမွေးနေ့ သောကြာနေ့က အမြတ်ဆုံး ၆၄၇ ရတနာ ၃ပါးက ၄၇၇ ဘုရားက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တရားနဲ့သံဃာက စနေနေ့ စပေါ်ရပါတယ် …။ ရတနာသုံးပါးပေါ်တဲ့နေ့တွေဟာ ၄၇၇ ရတနာ ရတနာကိုကောက်လည်း ၄၇၇ပဲနော်။ စနေနေ့မရှိပဲ တရားလည်းမရှိ နိုင် သံဃာရတနာလည်းမရှိနိုင် တရားနဲ့သံဃာမှ … Read more
ကိုယ်တွေနေ့တိုင်းသုံးနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေး ဒီလို အစွမ်းထက်မှန်းသိပြီးပီလား…
ကိုယ်တွေနေ့တိုင်းသုံးနေတဲ့ သွားတိုက်ဆေး ဒီလို အစွမ်းထက်မှန်းသိပြီးပီလား…ားတိုက်ဆေးကို မနက်တိုင်း သွား သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်ဖို့နဲ့ ခံတွင်းနံ့ကင်းစင်ဖို့ အတွက်ပဲ အသုံးပြုလို့ရတာ မဟုတ်ဘူး …။ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ အခြားဖြေရှင်းလို့ရမယ့် နည်းလမ်းအချို့လည်း ရှိပါသေးတယ် နော် …။ (၁) အမဲစက်နဲ့ အမဲကွက်ပြသာနာများ သွားတိုက်ဆေး ၁ ဇွန်း နှင့် သံပုရာရည် ၂ စက် တို့ကို ရောသမမွှေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ အမဲစက်နှင့် အမဲကွက်များပေါ်သို့ ပွတ်လိမ်းပေးပြီး ၁၀ မိနစ် (သို့) ၁၅ မိနစ်ခန့် ထားပါ။ ပြီးလျှင် ရေဆေး ချလိုက်ပါ …။ (၂) ၀က်ခြံပြသာနာများ သွားတိုက်ဆေးကို နားကြပ်တံ သို့ ဂွမ်းတံလေးနဲ့ ယူပြီး ၀က်ခြံပေါက်နေသည့် နေရာများကို ပါးပါးလေး … Read more
သှေးထှကျအောငျမှနျတဲ့ ဂဏနျးဗဒေငျ…သငျရောဘယျနမှေ့ေးသလဲ ? ဝငျဖတျကွညျ့လိုကျ
တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 1st, 10th, 19th, 28th မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၁) သမား… တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 2nd, 11th, 20th, 29th မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၂) သမား… တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 3rd, 12th, 21st, 30th မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၃) သမား… တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 4th, 13th, 22nd, 31st မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == မငျးဟာ.. နံပါတျ (၄) သမား… တကယျလို့..မငျးဟာ..လတှရေဲ့. 5th, 14th, 23rd မှာ မှေးဖှားခဲ့မယျဆိုရငျ.. == … Read more
နတ်ကိုင်ကြမ်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ သစ်ပင်ကြီးအောက်ကနတ်ရုပ်ကြီး ကို တံတားလုပ် တက်နင်းဖြတ်တဲ့လူရဲ့အဖြစ်…
လူကောင်းကို အနိုင်ကျင့်ရတာ လွယ်တယ် ပုံပြင်ကလေးက ဒီလိုဗျ။ တခါက ရွာတရွာမှာ ရွာဦးနတ်ကွန်းဘေးမှာ ရေနှုတ်မြောင်း ဖြတ်စီးနေတယ်။ နတ်ကွန်းထဲက နတ်ရုပ်က မတ်တတ်ကိုယ်တော်ကြီး။ တနေ့တော့ လူတယောက်က မြောင်းဘောင်အတိုင်း လျှောက်လာပြီး ဟိုဘက်ကမ်းကို ကူးမယ်လုပ်တယ်။ အဲ့မြောင်းထဲမှာ ရေတော်တော်များနေတယ်။ ညက မိုးရွာထားတာကိုး။ ခုန်ကူးရအောင်ကလဲ မမီမကမ်းနဲ့။ မြောင်းထဲ ဆင်းကူးယင်လဲ ရေစိုမယ်လေ။ ပြီးတော့ ဒီလူကလဲ ခပ်ရွတ်ရွတ် ဆိုတော့ နတ်ကွန်းထဲက နတ်ရုပ်ကြီးကို ဆွဲချလာ၊ မြောင်းပေါ်ခွကျော်ပီး ချ၊ ပီးမှ နတ်ရုပ်ကြီးကို တုံးတံတားလုပ်ပြီး မြောင်းကို ကူးသွားတယ်။ ဟိုဘက်ကမ်းအဆင်းမှာ နတ်ရုပ်ကြီး မျက်နှာခွက်ကိုတောင် ဆောင့်နင်းသွားလိုက်သေးသတဲ့။ သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး။ လယ်သမားကြီးတယောက် ရောက်လာတယ်။ သူကတော့ နတ်ရုပ်ကြီးမျက်ခွက်မှာ ရွှံ့ခြေရာကြီး ပေနေတာ တွေ့တော့ မျက်စေ့တောင် … Read more
၀မ်းဗိုက်က အဆီတွေကို အထိရောက်ဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး ကျစေမယ့် Detox Waterများ
ကျန်းမာပြီးစိုပြည်လှပတဲ့ အသားအရေအတွက် ရေများများသောက်ကြသလို အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ ပိုမိုကျန်းမာလှပစေဖို့ Detox water တွေကိုလည်း သောက်လာကြပါပြီ Detox water ဆိုတာကတော့ ရေထဲကို ကျန်းမာရေးအတွက်လဲအထောက်အကူပြု ၊ အလှအပအတွက်ပါ ထိရောက်စေမယ့် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေထည့်သောက်ကြတာပါ။ Detox water တွေထဲကမှ ဝမ်းဗိုက်အဆီကို အထိရော က်ဆုံးကျစေလို့ နေ့စဉ်သောက်ပေးသင့်တဲ့ အရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် … (၁) ရိုးရိုး ဆား အိုင်အိုဒင်းဆား မဟုတ်ပဲ ရိုးရိုးဆားကိုသာ အသုံးပြုရမှာပါ ။ ဆားဓာတ်မများအောင် သင့်လျော်တဲ့ ပမာဏကို သတိပြုထည့်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ် ။ – ရေနွေး ၄ ဖန်ခွက်နဲ့ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းကိုရောရမှာပါ ။ အရသာကောင်းချင်ရင်တော့ သံပယိုရည် အနည်းငယ်ထည့်ပြီး သောက်လို့ရပါတယ် ။ … Read more
၂၀၂၀-ခု ( ၁၀ ) လပိုင်းအတွက် တစ်လစာအထူးဟောစာတမ်းဗေဒင်
ဟောစာတမျးစောငျ့မြှျောနကွေသူလေးတှတှေကျ ဆရာအောငျခဈြမငျးရဲ့၇ရကျသားသမီးမြားအတှကျ ၁၀ လပိုငျး တဈလစာ ‌ဟောစာတမျး တနင်္ဂနွေ ဤလအတှငျး စိနျထညျပစ်စညျးမြား စကျပစ်စညျးမြား ဝငျလိမျ့မညျ။ လုပျငနျးသဈလုပျရနျ အကွံအစညျကောငျးမြား အဆကျ အဆကျသှကျကောငျးမြား ပျေါလာလိမျ့မညျ။ သို့သျော ဤကာလအတှငျး ပစ်စညျမြားကို ထုခှဲရောငျးခြ၍ လုပျငနျးအသဈ ကွီးကွီးမားမား စရနျ မကောငျးသေးပါ။ ဤကာလအတှငျး ထီမထိုးသငျပါ။ ထီပေါကျလြှငျ မိသားစုအတှငျး ကနျြးမာရေး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ညံ့သှား တတျသညျ။ မသှားခငျြသော ခရီးမြား စိတျညဈစရာခရီးမြား သှားရတတျသညျ။ အထကျလူကွီး ဆှမြေိုးအကွီးအကဲတို့က မိမိအပျေါ အထငျလှဲတတျသညျ။ သားသမီးမြား ကနျြးမာရေး ညံ့တတျသညျ။ ရှထှေကျမညျ။ ခွေ၊ လကျ၊ မကျြခွငျး၊ ခါးနားခွငျးမြား ဖွဈတတျသညျ။ စပျတူရှယျယာလုပျငနျးမြား ပျေါလာလိမျ့မညျ။ လုပျလြှငျ အောငျမွငျမညျ။ အထူးသတိပွုရနျ ငှလေူလိမျခံရမညျ။ … Read more